UNICEF Somalia - Feature stories - Warbixino Soomaali
20 Nofembar 2017 – Saraakiil sare oo ka tirsan Wasaaradda Waxbarashada ee Puntland ayaa maanta inta ay kuraasta dambe fariisteen waxaa ay carruur ka socotey dugsi degaanka ku yaalla ay ku wareejiyeen tababarkoodii aqoon-is-weydaarsiga ahaa si ay....
Abaarta oo Qoysaska Soomaaliyeed ku Khasabtey in ay Kala Nooolaadaan
Disembar 2016 - Tuulada Rabaable, ee u dhow Garoowe, oo ah Caasimadda Puntland, Soomaaliya – iyada oo hor fadhida aqalkeeda cusub – oo ah buul ka sameysan laamo lagu dedey calallo, iyada oo ku heeseysa qoys ku khasbanaadey in uu kala noolaado.
Video: Banaanka oo lagu saxaroodo waxay caruurta ku keeni kartaa nafaqa darro
18 November 2016 - In ka badan konton kun (300,000) oo caruur Soomaali ah ayaa la il daran nafaqa darro. Cunno yari kaliya ma sababto xaaladani, balse xanuun iyo shuban –taasoo ka dhigan caruurta jirkooda inaysan ku harin nafaqadii uu ka hali lahay ...
Waxa aan la rabo ilmo kasta waxaa qorey Nuuraddiin Faarax
14 November 2016 - Olole caalami ah oo lagu maamuusayo Maalinta Caalamiga ah ee Carruurta oo diiraddana lagu saarayo caddaalad-darrada weli haysata tiro aad u badan oo ka mid ah carruurta dunida ugu saboolsan oo uguna tabaaleysan ee bilowga xuska ....
Haweeney hablaha gudi jirtey oo hadda hoggaamineysa ololaha ka dhanka ah gudniinka (FGM/C)
Maarij 2016: Ayeeyo Cibaado Maxamed Cilmi waxaa ay nolosheeda ka dhacsan jirtey gudniinka hablaha yaryar, laakiin hadda waa mid ka mid ah kuwa hoggaaminaya dhaqdhaqaaqyada looga soo horjeedo Jarjaridda/Goynta Saxaaxa Dheddigga (Gudniinka).
Abaarta ka dhacdey waqooyiga Soomaaliya ayaa qoysaska ku khasabtey in safraan masaafooyin dhaadheer iyaga oo biyo raadinaya
Maarso 2016: Qoyska Xaliima waxaa ay hadba meel u guurayeen iyaga oo raadinaya biyo waxaan intaa ka sii dareysey abaarta ka jirta Puntland.
Olole Tallaalka Jadeecada iyo Diiwaangelinta Dhalashada Carruurta oo wada socda ayaa ku dhowaad 100,000 carruur Soomaaliyeed ah ay ku heleen waraaqo dhalasho
Januwari 2016 – Markii ugu horreysey taariikhda ayaa qoysaska Soomaaliyeed waxaa la siiyey fursad ay carruurtooda kaga tallaalaan jadeecada islamarkaasna ay ku diiwaangeliyaan si ay u helaan waraaq dhalasho.
Digniinta hore ee la heley ayaa sababtey in degdeg wax looga qabto roobabka El Nino ee Soomaaliya ka da’ay
Disembar 2015 - Khadiijo Amburre Nuurre marna ma sawiran in ay jiri doonto maalin ay ku khasbanaan doonto in iyada iyo carruurteeda shanta ah ay wada seexdaan teendho yar.
Midowga Yurub oo Soomaalida degaanka gacan ka siinaya biyo-yaraan sanado haysatey
Disembar 2015 – Dadka deggan magaalada Wajaale ayaa ku kalsoon in biyo-yaraantii haysatey magaalada muddo tobaneeyo sano ah ay dhammaan doonto marka la dhammeystiro mashruuca Iskaashiga Maamulka iyo Ganacsatada ee ay maalgelinayaan UNICEF/EU.
25 September - Ardayda ka socota Soomaliland oo kamid ahaa malaayiin arday aduunka ka kala timid islamarkaane ka qayb- galaya Casharka ugu weyn aduunka oo ay taagereso Hayada Caruurta ee Qaramada Midoobay UNICEF.
Cabdi oo kow iyo toban sano jir ah ayaa dadka tuulada ku dhaliyey in ay iska daayaan bannaan ku xaarista)
Maarso 2015: “Mar dambe duurka uma baxayo si aan u soo xaajo-guto. Berri ayaan bilaabayaa qodista godka musqusha”. Ka dib markii uu go’aankiisa ka dhawaajiyey, ayaa Cabdirashiid oo ah 11 sano jir waxaa uu si degdeg ah u dhinac fariistey carruur kale.
Biyo ammaan ah oo la isku halleyn karo oo la siiyo Dugsiyada iyo Xarumaha Caafimaadka ee Soomaalida
Febraayo 2015 – waxaa la joogaa amin duhur ah waxaana la soo gabagabeeyey waxbarashadii fasallada ee Dugsiga Hoose Dhexe ee Dhabolaq, koonfur-galbeed Somaliland.
Hal xidhmo oo budo nafaqo leh ah oo la qaato maalin walba ayaa xoojinaysa caafimaadka iyo koboca carruurta
Maarso 2015: Caasha Cabdi Cabdullaahi. Waxaa ay iyada iyo toddoba carruur ah oo ay dhashey ku nool yihiin xero cooshado ka dhisan oo ay deggan yihiin barokacayaal oo ku taalla Hargeysa ka dib markii ay abaar ka dhacdey degaankeeda ay ku khasabtey.....
UNICEF iyo Educate A Child ayaa iska kaashanaya in ay carruurta Soomaaliyeed ee la fogeeyo ay u heli lahaayeen iskuul
January 2015: Qoysaska ku nool tuulada fog ee Waabaha ayaa si cad u aqoonsan qiimaha waxbarashada. Dhismaha keliya ee dhagaxa ah ee ka dhisan Waabaha, oo ku taalla meel u dhaxaysa buuro qurux badan iyo tog...
UNICEF ayaa Somaliland gacan ka siinaysa sidii carruurta derbi-jiifka ah dib loola mideyn lahaa qoysaskooda
Disembar 2014: In ka badan 30 carruur ah, oo derbi-jiif ahaa, ayaa xaflad dib loogula mideysnayo qoysaskooda loogu qabtey caasimadda Somaliland ee Hargeysa iyada oo ay taageero ka geysatey UNICEF.